Création : 1 septembre 2019
«Finoana no namindrana an’i Enoka tsy hiharan’ny fahafatesana; ka dia tsy hita izy, satria nafindran’Andriamanitra, fa talohan’ny namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan’Andriamanitra izy ». Heb. 11:5
Tamin’ny androny dia mpampianatra ny fahamarinana i Enoka. Nampita ny fahamarinana izy, niaina izany fahamarinana izany; ary ny toe-tsainy izay miara-mandeha amin’Andriamanitra dia nifandrindra tanteraka tamin’ny iraka masina nataony. Niteny avy taminn’y bitsiky ny Fanahy Masina ny mpaminany Enoka. Fahazavana tao anatin’ny haizin’ny fitondran-tena ratsy izy, lehilahy modely, niara-nandeha tamin’Andriamanitra, nankato ny lalàny-io lalàna io izay nolavin’i Satana ny hankato azy, izay nodikain’i Adama, neken’i Abela kosa ary io no fototry ny nahafatesany. Ankehitriny, Andriamanitra dia haneho eo anatrehan’izao rehetra izao fa tsy marina ny fiampangan’i Satana fa azon’ny olona atao ny mitandrina ny didin’Andriamanitra. Hoporofoiny fa na dia mpanota aza ny olona dia afaka ny hanana fifandraisana amin’Andriamanitra, azony atao ny hanana eirtreritra sy fisainana tahaka an’Andriamanitra, ary haneho marina an’i Kristy. I Enoka, ilay lehilahy masina, dia nofidin’Andriamanitra mba hamaky bantsilana ny faharatsian’izao tontolo izao, ary asehony miharihary fa azon’ny olombelona atao ny mitandrina ny didin’Andriamanitra.
Tsy vitan’ny hoe nifandray akaiky tamin’Andriamanitra sy nivavaka, ary niambina ihany koa i Enoka, fa rehefa niverina avy nanao fanelanelanana tamin’Andriamanitra izy dia nananatra ireo mpiara-belona taminy. Tsy nanafina ny marina izy mba hahitana fitia tamin’ireo tsy mpino izay nanao an-tsirambina ny fanahiny. Io firaisana akaiky tamin’Andriamanitra io dia nanafy herim-po azy hamitany ny asa masina.
Niara-nandeha tamin’Andriamanitra i Enoka “ka dia nankasitrahany izy”. Tombontsoa ho an’ny mpino ankehitriny koa izany. Mitoetra amin’Andriamanitra ny olony, ary Andriamanitra eo amin’ny olony. “Izaho ao aminy ary Hianao ato Amiko” hoy i Jesôsy. Ny fiaraha-mandeha amin’Andriamanitra sy ny fahatokisana fa ankasitrahany dia tsy fanandramana natokana ho an’i Enoka irery, na i Elia, na ny patriarka, na ny mpaminany sy ny apostoly ary ny maritiora ihany. Tsy tombontsoa fotsiny izany fa andraikitry ny mpianatr’i Kristy ny mitana an’i Jesôsy ao am-pony ary ny maneho Azy eo amin’ny fiainany andavanandro; ka dia ho tonga hazo mamoa izy ireo. - UL,t.228.